५ वर्षमा सोलुखुम्बुमा १८,२७३ मतदाता थपिए, कुन स्थानीय तहमा कति बढ्यो ? - Sagarmatha Online News Portal
५ वर्षमा सोलुखुम्बुमा १८,२७३ मतदाता थपिए, कुन स्थानीय तहमा कति बढ्यो ?
सोलुदुधकुण्डमा मतदाता बढ्यो, नेचासल्यानमा घट्यो !
बुद्धवीर बाहिङ ४ बैशाख २०७९, आईतवार
सोलुखुम्बु । जिल्लाको मतदाता ५ वर्षको अन्तरालमा संख्या १८ हजार २ सय ७३ जना बढेको छ । वि.सं. २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाको कुल मतदाता संख्या ६१ हजार ७ सय ४६ थियो भने, आउने वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने मतदाता संख्या ८० हजार १९ जना पुगेको छ ।
सबैभन्दा बढि मतदाता संख्या सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकामा बढेको छ । ५ वर्षको अन्तरालमा नगरपालिकामा मात्रै ६ हजार ९ सय ७८ जना मतदाता थपिएका छन् । नगरपालिकामा ह्वात्तै मतदाता बढ्नुमा साविकको तिङला गाविस नगरपालिकामा गाभिएपछि मतदाताको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिकाको मतदाता संख्या ६ हजार १ सय ५९ महिला र ५ हजार ६ सय ५५ पुरुष गरी जम्मा ११ हजार ८ सय १४ जना रहेको थियो । आउने वैशाख ३० गतेको निर्वाचनमा नगरपालिकाबाट १८ हजार ७ सय ९२ जनाले मतदान गर्न पाउनेछन् ।
नेचासल्यान गाउँपालिकाको मतदाता संख्या भने घटेको छ । साविकको तिङला गाविस सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा गाभिएपछि नेचासल्यानको मतदाता संख्या घटेको हो । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेचासल्यानको मतदाता संख्या ११ हजार ३३ जना थियो । तर, तिङला नगरपालिकामा गाभिएपछि अहिले नेचासल्यानको मतदाता संख्या १० हजार ३ सय ८६ जना मात्रै रहेको छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा ६ सय ४७ जना मतदाता संख्या घटेको छ ।
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा पनि पहिलेको तुलनामा मतदाता संख्या बढेको छ । ५ वर्षको अन्तरालमा १ हजार ५ सय ६ जना मतदाता संख्या बढेको छ । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खुम्बु पासाङल्हामुमा ४ हजार ४ सय ४९ जना मतदाता थिए भने, अहिले ५ हजार ९ सय ५५ जनाले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने भएका छन् । त्यसैगरी माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा पनि मतदाता संख्या बढेको छ । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७ हजार ६ सय ७२ जना मतदाता थिए भने, २ हजार ७ सय ९६ जना मतदाता बढेर अहिले १० हजार ४ सय ६८ जना पुगेको छ ।
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा ५ वर्षको अन्तरालमा ११ हजार ९ सय ७७ जना मतदाताबाट २ हजार ९ सय ६० जना बढेर अहिले १४ हजार ९ सय ३७ जना पुगेको छ । त्यस्तै महाकुलुङ गाउँपालिकामा ५ हजार ५ सय ६५ मतदाताबाट २ हजार २ सय १९ जना बढेर अहिले ७ हजार ७ सय ८४ जना मतदाता पुगेको छ ।
लिखुपिके गाउँपालिकामा पनि मतदाता संख्या बढेको छ । ४ हजार १ सय २२ जना मतदाताबाट ७ सय ८५ जना बढेर अहिले ४ हजार ९ सय ७ जना पुगेको छ । त्यस्तै सोताङ गाउँपालिकामा पनि पहिलेको तुलनामा अहिले मतदाता संख्या बढेको छ । ५ हजार १ सय १३ जनाबाट १ हजार ६ सय ७७ जना मतदाता बढेर ६ हजार ७ सय ९० जना पुगेको छ ।